Shina: Hetsika antserasera manohitra ny CNNIC · Global Voices teny Malagasy
Shina: Hetsika antserasera manohitra ny CNNIC
Voadika ny 29 Janoary 2019 3:52 GMT
Vakio amin'ny teny polski, English
Nametraka tranonkala fanoherana antsoina hoe FuckCNNIC ny vondrona webmasters mba hanoherana ny politika vao haingana izay mandràra ny olona tsy hisoratra anarana aminny anaran-tsehatra CN.
Tamin'ny herinandro lasa teo, nanambara ny Foibem-baovao momba ny Tambajotra Aterineto ao Shina (CNNIC), sampana fanarahamaso ny anaran-tsehatra CN fa hanakatona ny fisoratana anarana amin'ny anaran-tsehatra ho an'izay olona tsy mividy anaran-tsehatra amin'ny anaran'ny orinasa na fikambanana manomboka amin'ny 14 Desambra 2009 amin'ny 9 alina :
Mba hanamafisana bebe kokoa ny maha-tena izy, ny fahamarinam-baovao sy ny fahafenoan'ny vaovao fisoratana anarana amin'ny anaran-tsehatra, dia ampahafantarina izao manaraka izao:
1. Mila mametraka taratasy fangatahana ofisialy ireo mpangataka anaran-tsehatra rehefa manao ny fangatahana antserasera any amin'ny mpiandraikitra fisoratana anarana. Ny fangatahana dia tokony ahitana: taratasy fangatahana orizinaly misy ny tombokasen'ny orinasa, ny fahazoan-dalan'ny orinasa (dika mitovy) ary kara-panondro (dika mitovy).
2. Tokony handinika tsara ireo taratasy fangatahana ny mpiandraikitra ny fisorantana anarana. Rehefa hita fa mahafeno fepetra ny fangatahana, dia mila mandefa ireo taratasy fangatahana amin'ny alalan'ny fax na E-mail any amin'ny CNNIC ny mpiandraikitra ary mitàna ireo antontan-taratasy fangatahana orizinaly.
3. Manomboka amin'ny andro nametrahana ny fangatahana antserasera, raha tsy naharay ny taratasy fangatahana ofisialy ao anatin'ny dimy andro ny CNNIC na raha tsy mahafeno fepetra ireo antontan-taratasy fangatahana, dia ho fafàna ny anaran-tsehatra nangatahana.
4. Ireo fepetra etsy ambony ireo dia mihatra manomboka amin'ny 9 ora maraina (Ora ao Beijing) ny 14 desambra 2009.
Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay amin'ny 86-10-58813000 na mailaka amin'ny service@cnnic.cn.
11 Desambra 2009
Niahiahy ny mponin'ny aterineto fa noteren'ny Sampan-draharahan'ny Fampielezan-kevitra, noho ny fanakianan'ny mpitondratenin'ny antoko sy ny governemanta foibe, nanakiana ireo sampan-draharaha sy mpanome tolotra fandraketana anaran-tsehatra ny CCTV noho ny vaovao diso, tsy marina na tsy feno amin'ny fizotry ny fisoratana anarana.
Nanome alalana ho an'ny orinasa telo avy eo ny CNNIC, anisan'izany ny orinasa fampandrosoana tambajotra Zhengzhou Dahuang, ny orinasan'ny teknolojiam-baovao nomerika Beijing Xinnet, ary ny orinasa Tambajotra teknolojia Beijing Blinux mba hisoratra anarana amin'ny anaran-tsehatra CN. Ankoatra izany, dia mitaky amn'ireo mpiserasera rehetra izay te-hangataka anaran-tserasera mba hanome fangatahana an-tsoratra, anisan'izany ny fahazoan-dàlana momba ny orinasa na ny taratasy fanamarinana fikambanana any amin'ireo mpanome tolotra fandraketana anaran-tsehatra (ireo orinasa voalaza etsy ambony) rehefa mandefa ny fangatahana amin'ny aterineto.
Nanoritra ny tranokalan'ny hetsi-panoherana fa nanao sorona ny zon'ny mpisera amin'ny aterineto noho ny fananana anaran-tsehatra ambony CN ny CNNIC ary manitsakitsaka mivantana ny fitsipi-pitondrantena mifehy ireo mpanome tolotra fandraketana anaran-tsehatra. Mandrisikany mpiserasera handray anjara amin'ny fanentanana fanangonan-tsonia ny hetsi-panoherana ary miantso ny tolotra fitarainana an-tariby ao amin'ny CNNIC 86-10-58813000. Eto ambany ny marika apetaka (autocollant) amin'ny hetsi-panoherana: